कल्चर Archives - Saajha Khabar
तपाईं अहिले कल्चर सम्बन्धी खबरहरु हेर्दै हुहुन्छ |
भक्तपुरमा बालकदेखि बृद्धहरु आगोमा नाच्ने, कस्तो परम्परा ?
भक्तपुर, ११ फागुन – आठवर्षका बालकदेखि ८५ वर्षका वृद्धसम्म सयौँ भारी दाउराको आगोमा नाचेर तान्त्रिक बिद्याको शक्तिलाई भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका-६ सिरुटारका ६५ घर राउत परिवारले सावित गरेका छन्। कुल देवताका रुपमा यहाँका वशिष्ठ गोत्रका राउत परिवारले मान्दै आएका विन्ध्यवासिनी, बाह्रभान्जा र सहिक्षेत्रपालका नयाँ डाङ्ग्रे तयार गर्न दुई महिनादेखि गुरुको तान्त्रिक विद्यामार्फत गरिएको प्रयास सफल भएपछि विधिअनुसार मंगलबार आगोमा नचाएर खलि खुवाउने कार्य सम्पन्न गरिएको हो। धामी गुरुले तान्त्रिक विधिद्वारा कुलदेवताको कर्णालीको कथा र व्यथा भारतीय रगं महोत्सवमा देखाइयो
फाल्गुन ९, २०७३- नेपाली भाषाको उदगमथलो मानिन्छ, कर्णालीको सिञ्जा उपत्यका । यहाँको घुमघामपछि संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशीले ‘सुनकेशरी’ नाटक लेखेका थिए, २०२८ सालतिर । त्यसपछि करिब कोमामा रहेको ‘सुनकेशरी’ लाई रंगकर्मी राजन खतिवडाले पाँच वर्षअघि मञ्चमा उतारे । यही नाटकले एसियाकै प्रतिष्ठित भारतीय रंग महोत्सवमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेसनल स्कुल अफ ड्रामा (एनएसडी) मा महोत्सवको सत्रौं दिन ‘सुनकेशरी’ मञ्चन भयो । एनएसडीको अभिमञ्चमा शुक्रबार करिब किन लगाइन्छ सिन्दुर ??? हिन्दु महिलाले पहिरिने सिन्दुरसँगको वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक कारण यस्तो छ ‘।
हिन्दु महिलाको पहिरिने सिन्दुर, चुरा, मंगलसुत्र, औठी र पाउजुलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । यतिसम्मकी आफ्ना बुज्रकहरुको भनाइलाई धारणा बनाउँदैं महिलाहरु पनि फेसनका रुपमा यी गहनाहरु पहिरिने गरेका छन् । तर, सिन्दुर, मंगलसुत्र, चुरा, औठी र पाउजुसँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । किन लगाइन्छ सिन्दुर ? सदियौंदेखि विवाहिता हिन्दु महिला सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँदैं आएका छन् । सिन्दुर शिरलाई दुई भाग पारेर बीचौ हिस्सामा लगाइन्छ आज ६७ औं प्रजातन्त्र दिवस : राष्ट्रपतिदेखि पूर्वराजासम्मको यस्तो छ सन्देश
काठमाडौँ – विसं २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ६७ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ । एक सय चार वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासकले जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो । प्रजातन्त्र ‘भ्यालेन्टाइन डे’ कै दिन प्रशासन कार्यालयमा कसियो उदाहरणीय लगनगाँठो
दोलखा, नेपालीले पनि मंगलबार ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस मनाए । दोलखामा त एक जोडी विवाह–बन्धनमै बाँधियो । त्यो पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा । न जग्गे न त मन्त्रोच्चारण नै । परम्परागत विधिविधान नभएपछि पण्डितको उपस्थिति पनि नहुने नै भयो । बरु उक्त विवाह गराइदिने पण्डितका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोराको भूमिका देखियो । बेहुला र बेहुलीले विवाह प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरे । त्यहाँ उपस्थित सबैले ताली बजाए । यत्तिमै ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा सलमान खानले प्रेमिकालाई दिए यस्तो उपहार
सलमान खानले युलिया वन्तुरसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे खुलेर चर्चा नगरेपछि उनले युलियाका लागि जे गर्छन् त्यसले स्पष्ट बताउँछ कि युलियाको लागि सलमानको मुटुमा कस्तो स्थान छ । यस्तैमा, भ्यालेन्टाइन डे को मौका पारेर सलमानले आफ्नी प्रेमिकालाई निकै राम्रो उपहार दिएका छन् । उनले युलियालाई सुनको जलप लगाइएको एक लकेटसहितको सिक्रि उपहार दिएको देखिएको छ । युलियाले उक्त सिक्रि लगाएको तस्बिर इन्स्टाग्राममा सेयर गरेका छन् । लकेटमा लेखिएको छ, ‘लभ, केयर, सेयर, ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा जोडी देखिए विवाह गरिदिने चेतावनी
आज भ्यालेन्टाइन डे हो । नेपालमा यो पर्व मनाउन केही रोकटोक नभएपनि भारतको कुनै स्थानमा यसको लागि बन्देज गरिएको छ । भारतीय राज्यको ओडिसाको भुवनेश्वरीमा बजरंग दलका एक नेताले यदि प्रेम जोडी सार्वजनिक स्थानमा देखिए उनीहरुको विवाह गराइदिने चेतावनी दिएका छन् । भुवनेश्वरमा बजरंग दलको संयोजक भूपेश कुमार नायकले यदि कुनै जोडीलाई पार्क, मल वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा आपत्तिजनक स्थितीमा देखिए उनीहरुको विवाह गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । भ्यालेन्टाइन डेको विश्वका अधिकांश देशहरुमा आज ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’मनाइँदैन
आज १४ फेब्रुअरी । विश्वका अधिकांश देशमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने तयारी चलिरहेको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि यो दिन प्रेमी–प्रेमिकाले एक–आपसमा आ–आफ्ना धारणा खुलेर राख्छन् । तर, संसारमा त्यस्ता देश पनि छन्, जहाँ भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन पाइँदैन । ती देशबारे जानकारी: मलेसिया मलेसियाको जनसंख्यामा ६० प्रतिशत मुस्लिम समुदायका छन् । यही समुदायले भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रणय दिवसका दिन यहाँ घरबाट निस्किनु पनि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । सन् भ्यालेन्टाइन डे विशेष : कुन राशि भएका व्यक्तिको प्रेम कस्तो ?
आज फेब्रुवरी १४, भ्यालेण्टाइन्स डे अर्थात् प्रेम दिवस, एकआपसमा मायाप्रेम साटासाट गरेर मनाईँदैछ। नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा युवायुवतीहरुले एकआपसमा रातो गुलाफको फूल तथा उपहार दिएर प्रेम दिवस मनाउँदै छन्। प्रेम दिवस मनाइ रहँदा कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाको आनिबानी थाहा पाउन मन हुन्छ। अब यसरी थाहाँ पाउनुहोस् तपाईले माया गर्ने व्यक्तिको स्वभाव : मेष : मेष राशि भएकाहरू आकर्षक र प्रभावशाली हुन्छन्। यो राशि भएका पुरुषमा स्त्रीलाई चाँडै पट्याउने राप्रपाद्धारा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर नारायणहिटी फर्काउने प्रस्ताव पारित !
काठमाडौँ, २ फागुन – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रलाई वैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा स्थापना गर्ने भएकोे छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज भएको बैठकमा केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा परिमार्जनसहित संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पार्टीले अवलम्बन गरेको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गराउनेलगायत कार्यदिशालाई पनि बैठकले पारित गरेको छ । संवैधानिक राजसंस्थाका विषयलाई पार्टीको महाधिवेशनमा छलफल पुरानो खबर यता »